Lea Ratna, vehivavy Malagasy Voaroaka ao Maorisy taorian’ny nahafatesam-badiny
Taorian'ny nahafaty ny vadin’i Léa Ratna, renim-pianakaviana Malagasy niteraka roa ( 12 sy 9 taona) ary efa 20 taona nipetrahana tao Maorisy dia nahazo taratasy tsy hahafahany mipetraka any an-toerana intsony ny tenany.
Saika safotra izy teo am-panokafana ny taratasy raha ny fanazavana nentiny tamin’ny gazety Defimedia any an-toerana. Niantso namana mihitsy izy mba hamaky ilay taratasy azony ka taorian’izay vao nitomany sy nihiaka nieritreritra ny fomba hamelomany ireo menaky ny ainy roa. Saika any an-toerana avokoa mantsy no efa nanompanan’ity renim-pianakaviana Malagasy iray ity ny fiainany manontolo. Efa nahavita trano any an-toerana izy, ao Maorisy ihany koa no misy ny orinasa iasany. Miantso ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ireo Malagasy mila ravinahitra any amin’ny Nosy rahavavy hiharan’ny antsojay tahaka izao ny tenany.